80 maalmood ayaa dib u cusbooneysiinaya Jules Verne adduunka oo dhan 80 maalmood gudahood | Androidsis
80 Maalmood waa ciyaar fiidiyow ah oo soo muuqatay dhammaadka xagaaga iyo in aan hadda fursad u helay inaan ku soo dhowaado. Marka waxaan samayn doonaa qiyaas kooban oo ah ciyaar fiidiyoow ah oo la magacaabay Ciyaarta Sanadka 2014 by TIME Magazine.
Riwaayad weyn oo leh sheeko is-dhexgal ah oo kuu oggolaan doonta inaad doorato marinkaaga adoo maraya adduunka 3D. Gaadiidka la isticmaali karo waxaa ka mid ah diyaaradda, gujis-hoosaadka, geel farsamo, tareeno iyo kuwa kaloo fara badan, oo aad isku dayi doontid inaad ku timaadid ciyaartoy kale. Ciyaar taas Waxay kuu soo bandhigi doontaa dhammaan dareenka safarka Jules Verne adduunka oo dhan.
1 Jidka waxaa lagu sameeyaa socodka
2 Ku noolaanshaha maalinta
3 Ciyaar fiidiyow ah oo gaar ah
Jidka waxaa lagu sameeyaa socodka
80 Maalmood ayaa na hor dhigaya buuggeena xiisaha leh ee taabashada steampunk oo ay ka buuxaan astaamo fantastik ah iyo sheekooyin taxane ah oo cidhiidhi na gelin doona. Iyo sida ciyaaraha oo kale Ciyaaraha Ciyaaraha, ficil kasta ayaa go'aamin doona sheekada la sheegayo. Laga soo bilaabo waxa ay tahay in la beddelo xaaladda xiriirkaaga, ka raadso waddooyin cusub saaxiibka safarka cusub ama soo hel dariiq cusub oo aad lacag ku kasbato halka aad ku socoto.
Ciyaartan fiidiyowga ah wuxuu leeyahay hawo u quudhin iyo sahamin ay isticmaaleyaal badani jeclaan doonaanHaddii ay qorsheyneyso wadada, qiimaha gaadiidka ama intee in le'eg caafimaadkeenna ayay qaadan doontaa si looga gudbo meelaha qaarkood ee meeraha.
Ku noolaanshaha maalinta
80 Maalmood ayaynu qayb ka noqon doonnaa macnaha in nolol loo raadsado sida ay tahay. Magaalooyinka qaar waxay leeyihiin suuqyo lagu ganacsado, halka badankood ay leeyihiin hudheelo in la seexdo oo la ogaan doono in goobaha qaarkood ay leeyihiin dhacdooyin gaar ah waxa ay tahay in laga gudbo magaalo sida Hindiya oo kale ah ama in lala kulmo Robot Revolution in Russia laftiisa.
Sheekada ay ciyaartan fiidiyowga ahi sheegeyso ayaa sameyn doonta xitaa haddii aad dhammeysid, waxaad dooneysaa inaad mar labaad u ciyaarto si aad u doorato marin kale Aayaheena tan iyo markii aan ka horreyno adduun si qurux badan loo abuuray. Haddayna jirin wax la sheego, waxaan u gudubnay dhinaca multiplayer-ka oo kor u qaadaya astaamaha tayada leh ee 80 Maalmood, maadaama aad arki karto raadadka horumarka ee ciyaartoyda kale ee adduunka.
Ciyaar fiidiyow ah oo gaar ah
80 Maalmood ayaa ku dari karay kuwaas 10 kulan oo khaas ah ayaan keenay shalay ilaa khadadkaas ilaa waxaa jira ciyaaro yar oo sidan oo kale ah oo isagu wuxuu leeyahay aurea inuu ku raaxeysto ciyaar gaar ah. Naafada keliya ayaa ah inaan lagu tarjumin Isbaanish, laakiin haddii kale jawharad loogu talagalay Android. Ma seegi kartid ballanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Jules Verne Dunida oo dhan 80 Maalmood
Sida loo helo loona kala hormariyo isku xirka WiFi-ga ugu fiican Android